About Us - Ningbo Ke Ming milina Co., Ltd
Ningbo Yinzhou Ke Ming milina Manufacturing Co., Ltd.manokana ao amin'ny orinasa mpamokatra entana very savoka ny fampiasam-bola castings sy ny vokatra vita amin'ny vy sy ny karbôna ambany firaka vy, dia ny fampiasam-bola mpamatsy rano castings amin'ny fitaratra dingana ao Shina. Izany dia ahitana ny 2 lehibe trano, na vy fanariana foundry sy CNC machining orinasa izay mahatonga antsika ho afaka hanome na marina tsara castings sy nahavita vokatra tamin'ny isan-taona famokarana fahaiza maherin'ny 10000 taonina, ary ny vokatra dia indrindra naondrana any Eoropa, Amerika, Japana sy ny hafa toerana manerana izao tontolo izao.
Ny orinasa no misy ao amin'ny orinasa malaza tanàna Yinzhou, Ningbo ao Shina. Tena mety ho tonga miaraka amin'ny mahasoa toerana jeografika. Ny orinasa dia naorina teo an 2002, mandrakotra faritra tanteraka ny 5000 metatra toradroa ary ankehitriny dia manana mihoatra ny 50 employees.We manana ny orinasa maoderina sy ny mandroso CNC machining fitaovana.
Ny vokatra manarona isan-karazany ny orinasa anisan'izany ny lamasinina & lalamby, fiara & kamiao, fanorenana milina, fitrandrahana harena ankibon'ny tany milina, forklift, fambolena milina, fanamboaran-tsambo, solitany milina, fanorenana, miditra tsimoramora sy paompy, herinaratra milina, fitaovana, ny hery fitaovana sy ny sisa. Isika afaka mamokatra vokatra araka ny mpanjifa 'sary na ny santionany, dia mifantoka amin'ny carbone na vy sy firaka iva vy. Up ny amin'izao andro izao, mihoatra ny 100 sy 5000 akora karazana vokatra samihafa no novolavolaina ary vokarin'ny antsika. Fantatsika tsara ny indostria isan-karazany fitsipika, toy ny Shinoa GB, American ASTM, AISI, alemà Din, frantsay NF, Japoney Jis, Britanika BS, Australian AS sy ny Fikambanan'ny Amerikana lalamby (AAR) sy ny indostria fitsipika.